CPA VS. nanofa kaonty - Which Is Better? [It's A Close Call]
CPA vs CA (nanofa kaonty): Iza no tsara ho anareo:?
23 Aug CPA vs CA (nanofa kaonty): Iza no tsara ho anareo:?
Updated:Oktobra 20, 2018
Iza no tsara kokoa? Iza fanendrena dia hanampy ny asa? Rehefa manapa-kevitra ny safidy ny asa amin'ny accountancy, dia mety ho ao anaty olana hifidy eo amin'ny CPA na CA. Ny fanontaniana manan-danja izay mipetraka dia CPA na hahasoa ny asa lalana na CA? Tsy misy mazava mpandresy satria toetra roa hanampy hitombo ny fahaiza-manao ara-teknika, accountancy fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao raharaham-barotra fitantanana. koa, CPA sy CA mpihazona miezaka ny mitovy niely manerana ara-barotra sy ny kaonty-bahoaka - dia tsirairay dia manome fahaizana ambony indrindra manovaova hiasa manerana ny indostria. Andeha hojerentsika ny zavatra tsirairay ireo certifications mitarika sy ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny roa.
Inona no atao hoe CA?
CPA vs CA: karama
CPA vs CA: Mora fanamarinana sy ny Requirements
A Certified kaonty-bahoaka dia matihanina izay manana nandalo ny CPA fanadinana nomen'ny Amerikana Institute ny Certified Public bola (AICPA) ary nahatanteraka ny fianarana rehetra sy ny asa traikefa takiana mifandray amin'ny fandraisana ny fanadinana. Ireo matihanina ireo manam-pahaizana ao amin'ny US GAAP, US fidiram-bola federaly hetra, ary maro amin'ny faritra hafa any Etazonia kaonty sy ara-bola toy ny fanaraha lalàna. Na dia izany fanamarinana dia hajaina manerana izao tontolo izao, fa ny fanendrena Etazonia manamarina fa ny matihanina dia mahefa any Etazonia kaonty sy afaka hanao fanaraha sy ny hetra izay asa matihanina hafa tsy mahazo manao.
A nanofa kaonty (CA) dia matihanina Izay lasa ny CA fanadinana sy ny fianarana takiana ao amin'ny misy azy tany fanamarinana. Maro ny fikambanana izay manome fanabeazana sy fandinihana ho an'ny čas. Misy ohatra vitsivitsy ahitana ny Institute of nanofa bola ny Scotland (ICAS), ny Institute of nanofa bola tany Angletera sy Pays de Galles (ICAEW), Institute of nanofa bola ny India (Ichhai) ary ny Kanadianina Institute of nanofa bola (CICA.) Nanofa bola in Kanada, Aostralia, Novely zelandy, Meksika sy Irlandy manana reciprocity fanekena ny United States. Raha afaka ny manondro zavatra mitovy mandalo fanadinana, izy ireo dia afaka miasa ao amin'ny U.S. tahaka ny CPAs. Čas ireo manam-pahaizana ao amin'ny IFRS sy ny fenitra iraisam-pirenena kaonty. Na dia mety ho tsara ao amin'ny US tanan'ny GAAP, ka tsy araka ny fiofanana ao amin'io faritra io ho toy CPAs ireo.
Ny fanendrena CPA dia hanokatra ny asa be dia be ny safidy ho anao. Rehefa mahazo taratasy fanamarinana ny CPA dia afaka miasa eo ambany kaonty isan-karazany toy ny sehatra iraisam-pirenena Kaonty, anaty & External Tatitry, Consulting Services, Nanoritra Accounting, Assurance tolotra, hetra & Financial Planning sns. Miaraka amin'ny fankatoavana manerantany, ho hitanao ny toerana tsara indrindra mba miasa na aiza na aiza any amin'ny tany maro. Toy izany koa, CA fanendrena koa hanome anareo safidy maro ao amin'ny faritra Kaonty manokana toy ny hanara-maso akaiky, hetra, Corporate Finance, Corporate Lalàna. Rehefa avy nahazo ny CA Certification Azonao atao na ny asa efa misy ambony orinasa ny Accountancy na afaka manomboka anao manokana matihanina tsy miankina fanao.
Samy CPAs sy čas karama miankina amin'ny toerana ara-jeografia, anaran'ny asa, sy ela niainana. Noho izany, dia mitovy tanteraka. Ny Median karama ho CPA ao amin'ny U.S. dia $62,410 ary ny medianina karama ho CA ao amin'ny U.K. dia £ 34.637 ($44,849 USD). Samy efa lehibe certifications miakatra karama fivezivezena ary afaka samy manao $150,000 na mihoatra isan-taona, arakaraka ny toerana sy ny haavon'ny traikefa.
Tena kely mivantana kokoa ho lasa CPA eo amin'ny lafiny fotoana takiana. Tsy maintsy ho vita 150 undergraduate ora bola ary tsy maintsy ihany koa efa nahavita nanome ny ora maro teo ambany fanaraha-maso mivantana ny CPA. Ianao dia manana 18 volana mba hipetraka ho an'ny dia mandroso rehetra ampahany efatra ny CPA fanadinana. Noho izany, dia afaka maka ny 8 1/2 taona ho lasa CPA (undergraduate dimy taona ny asa, roa taona teo amin'ny asa sy ny 18 volana mba mizara ny CPA fanadinana). Mandra-pahoviana mitaky ho lasa CA dia miankina amin'ny firenena izay kasainao mampihatra sy ny fari-pahaizana sy ny traikefa matihanina. Ohatra, ny ICAS dia manana safidy efatra:
Direct teny lalana ho an-tsekoly-leavers, izay mitaky dimy taona ny fiofanana miaraka amin'ny ICAS-neken'ny mpampiasa;
Nahazo diplaoma teny amin'ny anjerimanontolo lalana ho an'ny nahazo diplaoma, izay mitaky ny telo taona ny fiofanana miaraka amin'ny ICAS-neken'ny mpampiasa;
Professional teny lalana za-draharaha fitantanam-bola ho an'ny matihanina ho nametraka matihanina amin'ny oniversite diplaoma (fantatra ara-dalàna ho toy ny UK mitovy) na dimy taona ny asa manan-danja sy ny traikefa
Ny lalana lalana izay mamela ny mpikambana ao amin'ny The nanofa Institute of Public Finance sy Accountancy (CIPFA) ny fahafahana ho tonga mpikambana ao amin'ny CA hahazoana ICAS sy fanendrena.
Misy lalana roa; mandrefy ny iray mifanaraka fahaizana manokana ary ny iray kosa, azo ampiharina fahaizana. Samy mitaky lalana fito taona taorian'ny fahaizana traikefa. Ny tsara indrindra "paoma-to-paoma" fampitahana dia ho CPA = ICAS lalana #2.
Ohatrinona ny vidiny mba hahazoana ny fahazoan-dàlana dia miova CPA. Firenena rehetra mitaky fa mahazo farafahakeliny ny diplaoman'ny fitantanam-bola na raharaham-barotra amin'ny anisan'izany maromaro takiana taranja. Saika rehetra mitaky milaza fa mahazo, fara fahakeliny, 150 bola ora ihany koa. Noho izany, ny CPA mitaky fampianarana tsy hitovy arakaraky raha hanenjika ny mari-pahaizana maîtrise mba hahazoana ny farany 25 oniversite bola fotsiny ora na mandray kilasy kokoa ao amin'ny maripahaizana fandaharana. Ny dingana mihitsy fanamarinana hitentina about $3,000 anisan'izany ny Mazava ho azy araka ny tokony CPA famerenana sy ny saram fanadinana. Rehefa avy mandalo ny fanadinana, ianao koa dia mila ny fahazoan-dalana manan-kery foana amin'ny fampianarana mitohy nahazoan-dalana isan-taona. Ireo mitovy ny vidiny fa tena lany eo $50-$100 isan-bola ora. Hoy ny mitaky ny ankamaroan'ny manodidina 40 nahazoan-dalana isan-taona. Aza manahy na. Raha hahazo asa ao amin'ny fitantanam-bola-panjakana mafy, dia handoa noho ny fianarana mitohy.
Ny vola lany noho ny lasa CA Miankina amin'ny firenena no miaina ao, ny fianarana sy ny asa traikefa ary inona no fikambanana ianao fampiharana ny mba hahazoana ny fanomezan-dalana.
Ohatra, raha fampiharana ny ICAS sy fidinao Pathways #1 ary #2 (mivantana avy any am-pianarana na teny oniversite) dia ny mpampiasa no manarona ny vola lany. Raha hifidy ny lalana #3 (za-draharaha Professional), ny fandaniana dia mitovitovy £ 5.750 - £ 13.900. lalana #4 (for CIPFA mpikambana) fandaniana ireo £ 1.035 ho an'ny Relevant Expertise lalana. Fa ny fahaiza-Mahasoa lalana, ny fandaniana dia: £ 596 ny fampiofanana fifanarahana; £ 1.547 - 1.935 for £ saram-pianarana; £ 292 ny fanadinana sy ny £ 495 saran'ny fanao isan-taona ho an'ny ICAS / CIPFA mpikambana àry izay tokony. Raha misy fianarana mitohy sy ny fahazoan-dalana takiana, dia ho tapa-kevitra ny firenena izay miasa.
Raha liana amin'ny fiaraha-miasa any ivelany, na any amin'ny orinasa iraisam-pirenena, dia tokony hifidy ny CPA. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny CPA tsara indrindra Prep taranja Eto. -tsy izany, raha te-manomboka anao manokana Hanaraha-maso fampiharana in India, hifidy ny CA. Fanampin'izany, ny CA fanadinana dia tsy lafo raha ampitahaina amin 'ny fanadinana ny CPA. Tsy anankiray amin'ireny certifications no tsara kokoa noho ny hafa. Fotsiny izy ireo, ary samy hafa ampiasaina ho an'ny tanjona isan-karazany. Afaka manantena ny hanao toy izany koa ny momba ny karama nomena alalana tamin'ny roa fa ny toerana, asa toerana, orinasa, ny asa sy ny traikefa dia mitovy. Tena midina ny zavatra tianao hatao sy izay mety miasa. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount, Deep Discount 34 mampiasa ankehitriny
CPA, Surgent CPA Review, Exclusive Discount 38 mampiasa ankehitriny
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 41 mampiasa ankehitriny
CPA, Wiley CPAexcel, Tolotra manokana 37 mampiasa ankehitriny
CPA 34 mampiasa ankehitriny
CPA, Roger CPA Review, Exclusive Discount 34 mampiasa ankehitriny
Last Used 3 minitra lasa izay
CPA, Surgent CPA Review, Deep Discount 33 mampiasa ankehitriny
Last Used 55 segondra lasa izay
Last Used 6 minitra lasa izay
CPA, Tolotra manokana, Dia manifakifa ny CPA 37 mampiasa ankehitriny
Last Used 13 segondra lasa izay
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 41 mampiasa ankehitriny
Last Used 12 minitra lasa izay
CPA, Gryfina, Exclusive Discount 34 mampiasa ankehitriny
CPA, CPA Gleim Review, Exclusive Discount 33 mampiasa ankehitriny
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 39 mampiasa ankehitriny
CPA, Surgent CPA Review, Webinar 36 mampiasa ankehitriny
CPA, Roger CPA Review, Famatsiam-bola ny tolotra 36 mampiasa ankehitriny
CPA, Surgent CPA Review, Famatsiam-bola ny tolotra 34 mampiasa ankehitriny
Last Used 57 segondra lasa izay
CPA, Roger CPA Review, Hafa 33 mampiasa ankehitriny
CPA, Wiley CPAexcel, Hafa 33 mampiasa ankehitriny
CPA, Wiley CPAexcel, Exclusive Discount 35 mampiasa ankehitriny